ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲ (ရုပ်သံ) | ပျူနိုင်ငံ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရုပ်ရှင်အနုပညာရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲ (ရုပ်သံ)
အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကိုဇာဂနာတို့ ကိုကျော်သူတို့
ခင်ဗျာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ရုပ်ရှင်နှင့် ပက်သက်ပြီး
`အရုဏ်ဦးတွင် ဖူးသည့်ကြာ´ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြင့် သရုပ်ဆောင်
ခန့်စည်သူသည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသား လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်
အသက်နှင့် ဘ၀ကို ပေးဆပ်ခဲ့သော နိုင်ငံရေးအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ
နိုင်ငံရေးသမားများ တော်လှန်ရေးသမားများကို ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်း
အောင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ....
ထိုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်မည်ဆိုလျှင်
ခန့်စည်သူကို ဂဋ္ဌုန်ဦးစောအဖြစ် ရွေးချယ်ပြီး လွင်မိုးအား ဦးစောတပည့်
သက်နှင်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင် နေရာများအတွက် ရွေးချယ်သင့်
ပါကြောင်း အကြံပြုချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ...
Posted by ကိုအောင် at 19:03
ဟိဟိ... အဲ့ဒီ အကြံကောင်းတယ် ကိုအောင်။ တွေးလည်း တွေးတတ်တယ်း)
3 December 2011 at 20:31
ဟုတ်ပါတယ် ခိုင်သင်းကြည်ကိုလဲ ဦးစောရဲ့ ဇနီးနေရာမှာထားပါ
3 December 2011 at 23:33
ထောက်ခံပါတယ်.. ဦးစော နေရာမှာ ခန့် စည်သူ ပြီးတော့ ခိုင်သင်းကြည်ကိုလဲ ဦးစောရဲ့ ဇနီးနေရာမှာထားပါ ..
4 December 2011 at 03:04
4 December 2011 at 07:43
I hate Lwin Moe to participate Bogyoke movie. If he would be allowed to participate he should act as villain, because of his attitude and behaviour.
Some actors were forced to act in the policy movies, I do understand them and I don't want to say anything about them whether they act or not. but Lwin Moe is not like that kind of actors. We had already seen clearly about his behaviour in the last election. I absoulety hate him. He is rubbish.
4 December 2011 at 16:31
4 December 2011 at 18:14
လွင်မိုးကြီးက မျက်နှာပြောင်လိုက်တာ အံ့ပါ့
6 December 2011 at 06:57
ဗိုလ်ချုပ်နေ၇ာထား၇င်တော. တော်တော် တုမယ်နော်.။
7 December 2011 at 16:50
ဗျိုလ်ချုပ်နေရာမှာ တော့ ဘာမှ မထားရင်ကောင်းမယ် အကိုကြီးရ
ဘာလို့ လည်းဆိုရင် အနော်တို့ ဗျိုလ်ချုပ်က
မည်သို့သောလူမျိူးနဲ့မှ နှိုင်းရှင်လို့ မရနိုင်လို့လေ..
တွေးကြည့်တာပါ.း) အမှားပါရင် ခွတ်လွတ်ပါ.
14 December 2011 at 14:40
ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကို ဖြစ်သလိုရိုက်လို့မရပါ..ပြည်ပအကူအညီတွေလိုအပ်ပါတယ်..ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ရုပ်ချင်းတူသူကိုရှာမည်ဆိုပါက ဒီတစ်သက်တွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်..ဦးစောလိုလူစားနှင့်အခြားနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကိုလည်းတူအောင်ရွေးချယ်မှသာလျှင်ဇာတ်ရုပ်ပီပြင်ပါလိမ့်မည်..၊ ကမ္ဘာကျော်မည့်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်နှင့်တော့ မရိုက်စေချင်ပါဘူး၊ ဦးစောနေရာမှာဇင်ယော်မောင်မောင်ကြီးကိုထည့်သွင်းရိုက်မည်ဆိုပါကပီပြင်နိုင်ပါသည်။ သွားတွေကိုနဲနဲပြုပြင်ပြီး မျက်မှန်မည်းကြီးတပ်ကြည့်လိုက်ပါ.အုံး..ချွတ်စွတ်